Imidiya yokuncokola kwiKhondo eliKhathaleleyo | Martech Zone
Imithombo yeendaba yeNtlalontle yokuKhathalela iMisebenzi
NgoMgqibelo, Oktobha 15, 2011 Lwesine, Disemba 7, 2017 Douglas Karr
Inkqubo kanomathotholo yayizolo nge UAustin noJeffrey baseOrabrush yayiyincoko emangazayo kwaye enye yazo yayijolise kwimfundo. UJeffrey waphumelela kwiYunivesithi yaseBrigham kwaye wayichaza imfundo awayeyinikwa ngaphandle kweklasi kwintengiso ye-Intanethi. Ngokuqinisekileyo ihlawulwe-umsebenzi wakhe kwi-Orabrush khange ube yinto emfutshane engakholelekiyo.
Le infographic intsha ivela Uyilo lweVoltier ijolise kumajelo eendaba ezentlalo ngenjongo yokusebenza kwengqondo:
Kucacile ukuba ukuhlangana kweendaba zosasazo ngamashishini kulapha ukuhlala. Ngama-79% amashishini ngoku asebenzisa umba othile kwimidiya yoluntu, ixesha elitsha kubudlelwane babathengi kunye neshishini sele liqalile. Yindima yeqhinga lenkampani ekulawuleni nasekukhuthazeni obu budlelwane kwi-intanethi. Njengokuba olu hlobo lutsha lonxibelelwano lukhula, iyakuba ziingcali zobuchule kwezentlalo ezisebenzayo nezinobuchule eziya kuthi zibalasele, ngelixa abo bemiyo endaweni yabo banokuthi bathatyathelwe indawo zizinto ezizisebenzelayo okanye babone izikhundla zabo zingahluthwanga.
Nceda uhlalutye amaphepha akho okufika